Snap mapakeji izvozvi zviri pamutemo muFedora 25 uye pakutanga | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro takagamuchira imwe nhau yepamutemo kubva kuCanonical uye Ubuntu. Uye kwete, hapana chakanangana nechimwe chigadzirwa chakamiswa asi zvakapesana. David Callé akazvitaurira izvozvo Tora mapakeji ekuparadzirwa kweFedora izvozvi zviripo zviri pamutemo. Kunyanya iyo Fedora 25, Fedora 26 uye Fedora 24.
Iye zvino kutsigirwa kwemapakeji mukati mekuparadzirwa uku kuri pamutemo, chimwe chinhu chaimbove chisiri, kunyangwe snap mapakeji aigona kuiswa.
Fedora parizvino ine rutsigiro rwepamutemo rweyese snap mapakeji uye vashandisi vanogona kuishandisa nekuzivisa matambudziko
Chero zvazviri, iyo yepamutemo Fedora repositori inotova nemapakeji ane chekuita neiyo Snapd daemon uye snap mapakeji, nenzira yekuti vashandisi vagone kukwanisa kumisikidza chero chishandiso mukati meFedora kuburikidza nekukanda mapakeji.
Kuti uwane gadzira snap mapakeji kana kuita iyo snapd daemon inoshanda, sekumwe kugovera, isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Ichi ichaisa daemon iro rinotibvumidza isu kuti tiise snap mapakeji. Pasina izvi, kuiswa kwepakeji hakushande uye nekudaro iyo snap yekuraira inenge isingaite. Mushure mekuita uku kumisikidza, ikozvino tinogona kuvhura iyo terminal uye nekunyora zvinotevera:
Munyaya ye Fedora 24, pane dambudziko nesocket, saka usati waisa chero snap application uye mushure mekuisa iyo snapd dhimoni, isu tinofanirwa kuteedzera unotevera kuraira:
Snap mapakeji ari nyore kuisa uye kubata, senge flatpak mapakeji. Fedora ndeimwe yemazhinji akaparadzirwa ayo marongedzero maviri anotora, chimwe chinhu chinoyeuchidza nezvekupokana kuti makore apfuura kwaive pakati pe rpm uye mapakeji emadhishi, kukonana kwakagadziriswa nezvishandiso senge mutorwa kana zvinyorwa zvine mapakeji ese. Izvi zvakaita kuti mushandisi uye musimudziri asarudze mhando yepakeji yekushandisa uye chiri chinhu chichaitika neFlatpak neSnap. Zvisinei Ndeupi mhando yemapakeji aunochengeta?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Snap mapakeji izvozvi zviri pamutemo muFedora 25 uye pakutanga
Ubuntu 17.04 iri kuuya svondo rino neUniity 7